Hery - Tsiky dia ampy | 4
Mifindra lohamilina koa ny blaogy
2016-03-31 @ 08:57 in Serasera.org
Miezaka mamindra monina ny site blaogy.com ho amina serveur vaovao aho ka raha toa misy olana dia mba ilazao :-)
Mes deux mois de Netflix
2016-01-12 @ 12:40 in Izaho sy ny ahy
Roa volana izay no nitsapako ny netflix. Ny iray volana maimaim-poana, dia avy eo mbola nampiasa iray volana 8 Eur. Nanaitra ihany aloha tamin'ny voalohany hoe tonga eto Italia (sy toa eran-tany koa) ny Netflix izay heno be avy any amin'ny bekintana USA ny lazany. Maimaim-poana rahateo ny iray volana, ary afaka mijanona avy hatrany na oviana na oviana ka tsy te hijery intsony. Dia nanandrana tokoa. Tao anatin'ny iray volana dia lany tao nijerena serie iray misy 7 saisons izay manana episodes 12 amin'ny 45 minitra ny fotoana. Raha atao kajikajy dia any amin'ny 65 ora any. Zavatra roa no azo tsoahina: matoa zavatra nandaniako 65 ora izany dia mahaliana ahy tokoa :-) (izaho tsy miteny hoe tsara), ary faharoa tena betsaka ihany izany 65 ora izany ao anatin'ny iray volana. Ka hotohizana sa hajanona?
Anisan'ny mahafinaritra ny Netflix dia mandefa hafatra izy rehefa ho tapitra ny volana hoe mbola hanohy hijery ve ianao amin'ny volana manaraka? Raha tsy hanohy hijery dia mila tapahina ny famandrihana, raha tsy izany dia alainy tsikelikely ao amin'ny kaontinao ny sarany. Ny Gasy moa tsy mety afa-po ary mila mahazo tombony foana, dia notadiavina izay tsy hahafaty antoka raha toa ka mandoa ilay 8 Euros isam-bolana... na dia kely aza izany. Hita ary aloha izao fa ahazoana fahafinaretana ilay izy dia notohizana... holazaiko eo ihany rehef manamorida (teny vaovao io) toa ny nataon'ny sky izay voatery notapahina teo.
(Sary nindramina tao amin'ny internet)
Andiana fampianarana Word amin'ny video
2015-11-23 @ 08:55 in Fampianarana
Indraindray be loatra ny zavatra eritreretina hatao ka izay tonga ao antsaina amin'ny fotoana maha-mety azy sy azo atao avy hatrany dia atao.
Efa ela aho no nieritreritra hanao video mirakitra fampianarana faran'izay tsotra ireo fitaovana ampiasain'ny olona andavanandro amin'ny ordinatera. Koa atomboko amin'ny Microsoft Word izany. Fampianarana izay natao ho an'ny tena vao manomboka mihitsy. Misy ireo olona izay tsy nampiasa na tsy zatra nampiasa Word fa noho ny adidy izay nomena azy tampoka dia voatery tsy maintsy hampiasa Word. Misy koa ireo tonga dia nikatroka nanoratra tamin'ny Word ka ataony tahaka ny manoratra amin'ny vata fanoratana taloha (machine à écrire) no fampiasa izany, zary tsy afaka mihanoka amin'ireo zava-baovao isan-karazany mahamora ny fanoratana. Ary misy koa ireo efa mahay Word ihany fa mbola miadana be satria tsy mahita ireo fikafika mampalaky kokoa ny fanoratana.
Ho an'ireo olona ireto no tena nanaovako ity andiana video ity. Hisy fizarana 10 eo ka azonao arahina ao amin'ny playlist Jereo eto
Indro ary ny video voalohany
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 126 127 128 Manaraka»